နိုင်ငံပေါင်း ( ၁၀ ) နိုင်ငံက စွဲဆောင်မှုအရှိဆုံး အမျိုးသမီး (၁၀ )ယောက် - Myannewsmedia
နိုင်ငံပေါင်း ( ၁၀ ) နိုင်ငံက စွဲဆောင်မှုအရှိဆုံး အမျိုးသမီး (၁၀ )ယောက်
လူသားတွေ ရဲ့ မျက်ဝန်းက လိမ်ညာတတ်ပါတယ် ။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့သူတွေသာ ချောတတ်ပြီး ကိုယ်မနှစ်သက်သူတွေ ရုပ်ဆိုးတတ်ပါတယ် ။ ဒီလိုပဲ…ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က ချောတယ်လို့သတ်မှတ်ခံရတဲ့ အမျိုးသမီးလေးတွေ ဘယ်လောက်ချောလဲ အတူတူလေ့လာကြပါစို့…။ပြီးရင် နံပါတ် ဘယ်လောက် က အချောဆုံးလဲဆိုတာ မန့်ပေးခဲ့ပါ ။
Liza Soberano ဟာ ဖိလစ်ပိုင်မှာ စွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးအမျိုးသမီးအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရပြီး မဂ္ဂဇင်းတွေရဲ့ မျက်နှာဖုံးမော်ဒယ်အဖြစ် ကမ်းလှမ်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ အပြုံးကြောင့် သူမရဲ့ အလှဟာ ပေါ်လွင်တာလို့ ပရိသတ်က အသိအမှတ်ပြုထားဖြစ်ပါတယ်။
Helen Flanagan ဟာ ဗြိတိန်သူဖြစ်ပေမယ့် မတူညီတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုပုံစံနဲ့ ငယ်စဉ်ထဲက နေထိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာ အင်္ဂလိပ်အသံအစစ်မဟတ်ပဲ အိုင်းရစ်သံဝဲပြီး ချစ်စရာကောင်းသူအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။
Helen Flanagan ဟာ အမေရိကန်နဲ့ ကနေဒါသွေးရောသူဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာ ငယ်စဉ်ထဲက လွတ်လပ်မှုကို မြတ်နိုးပြီး သူမအင်အားနဲ့ ရှင်သန်ရပ်တည်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ ပင်ကိုယ် လွတ်လပ်တဲ့ စတိုင်နဲ့ ပွင့်လင်းတဲ့ အပြုံးတွေကြောင့် Fun များလာတာဖြစ်ပါတယ်။
Doutzen Kroes ဟာ နယ်သာလန်နိုင်ငံသူဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ အရပ်က5ပေ7လက်မ ရှိပြီး အညိုဘက်သမ်းတဲ့ ရွှေရောင်ဆံပင်တွေ ရှိပါတယ်။သူမရဲ့ အလှတရားကြောင့် ဒီ 10 ယောက် မှတ်တမ်းဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
Norelys Rodriguez ဟာ ဗင်နီဇွဲလားသူဖြစ်ပြီး သရဖူအများဆုံးရထားတဲ့ မော်ဒယ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ အရပ်နဲ့ သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ပြိုင်ပွဲတွေရဲ့ ဆုကို ရရှိစေတာဖြစ်ပါတယ်။
Meryem Uzerli ဟာ တူရကီနိုင်ငံသူဖြစ်ပြီး သူမကို တူရကီအစိုးရက အလှဆုံးမိန်းမချောအဖြစ် တရားဝင်မှတ်တမ်းတင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူမကို ဥရောပဘက်က သူဌေးတွေက လပ်ထက်ခွင့်တောင်းခံမှုတွေ ရှိနေဆဲပါပဲ။
Ani Lorak ဟာ ယူကရိန်း နိုင်ငံသူဖြစ်ပေမယ့် သူမဟာ ရုရှားသွေးစပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ရုရှားရဲ့ မျက်လုံးမျက်ခုံးနဲ့ ယူကရိန်းရဲ့ ဆံပင် နှုတ်ခမ်းတွေရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Adriana Lima ဟာ ဘရာဇီးနိုင်ငံသူဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးနဲ့ မျက်ဝန်းရွဲကြီးတွေဟာ ဘရာဇီးသူတစ်ဦးရဲ့ အလှစစ်ကို ဖော်ပြထားတဲ့ အလှပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။
လူသားတှေ ရဲ့ မကျြဝနျးက လိမျညာတတျပါတယျ ။ ကိုယျကွိုကျတဲ့သူတှသော ခြောတတျပွီး ကိုယျမနှဈသကျသူတှေ ရုပျဆိုးတတျပါတယျ ။ ဒီလိုပဲ…ကမ်ဘာအရပျရပျက ခြောတယျလို့သတျမှတျခံရတဲ့ အမြိုးသမီးလေးတှေ ဘယျလောကျခြောလဲ အတူတူလလေ့ာကွပါစို့…။ပွီးရငျ နံပါတျ ဘယျလောကျ က အခြောဆုံးလဲဆိုတာ မနျ့ပေးခဲ့ပါ ။
10. ဖိလဈပိုငျ (Philippines)
Liza Soberano ဟာ ဖိလဈပိုငျမှာ စှဲဆောငျမှုအရှိဆုံးအမြိုးသမီးအဖွဈ သတျမှတျခံရပွီး မဂ်ဂဇငျးတှရေဲ့ မကျြနှာဖုံးမျောဒယျအဖွဈ ကမျးလှမျးခံခဲ့ရတာဖွဈပါတယျ။သူမရဲ့ အပွုံးကွောငျ့ သူမရဲ့ အလှဟာ ပျေါလှငျတာလို့ ပရိသတျက အသိအမှတျပွုထားဖွဈပါတယျ။
9. ဗွိတိနျ (Britain)
Helen Flanagan ဟာ ဗွိတိနျသူဖွဈပမေယျ့ မတူညီတဲ့ ယဉျကြေးမှုပုံစံနဲ့ ငယျစဉျထဲက နထေိုငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။သူမဟာ အင်ျဂလိပျအသံအစဈမဟတျပဲ အိုငျးရဈသံဝဲပွီး ခဈြစရာကောငျးသူအဖွဈ မှတျတမျးတငျခံရတာဖွဈပါတယျ။
Helen Flanagan ဟာ အမရေိကနျနဲ့ ကနဒေါသှေးရောသူဖွဈပါတယျ။သူမဟာ ငယျစဉျထဲက လှတျလပျမှုကို မွတျနိုးပွီး သူမအငျအားနဲ့ ရှငျသနျရပျတညျခဲ့သူဖွဈပါတယျ။သူမရဲ့ ပငျကိုယျ လှတျလပျတဲ့ စတိုငျနဲ့ ပှငျ့လငျးတဲ့ အပွုံးတှကွေောငျ့ Fun မြားလာတာဖွဈပါတယျ။
Doutzen Kroes ဟာ နယျသာလနျနိုငျငံသူဖွဈပွီး သူမရဲ့ အရပျက5ပေ7လကျမ ရှိပွီး အညိုဘကျသမျးတဲ့ ရှရေောငျဆံပငျတှေ ရှိပါတယျ။သူမရဲ့ အလှတရားကွောငျ့ ဒီ 10 ယောကျ မှတျတမျးဝငျလာတာဖွဈပါတယျ။
Cristina Chiabotto ဟာ အီတလီသူဖွဈပွီး သူ့ရဲ့ အညိုရောငျမကျြဝနျးတှကေ တိမျးညှတျရီဝစေတောဖွဈပါတယျ။
Norelys Rodriguez ဟာ ဗငျနီဇှဲလားသူဖွဈပွီး သရဖူအမြားဆုံးရထားတဲ့ မျောဒယျတဈဦးဖွဈပါတယျ။သူမရဲ့ အရပျနဲ့ သူမရဲ့ ခန်ဓာကိုယျဟာ နှဈစဉျနှဈတိုငျး ပွိုငျပှဲတှရေဲ့ ဆုကို ရရှိစတောဖွဈပါတယျ။
Meryem Uzerli ဟာ တူရကီနိုငျငံသူဖွဈပွီး သူမကို တူရကီအစိုးရက အလှဆုံးမိနျးမခြောအဖွဈ တရားဝငျမှတျတမျးတငျပေးထားတာဖွဈပါတယျ။သူမကို ဥရောပဘကျက သူဌေးတှကေ လပျထကျခှငျ့တောငျးခံမှုတှေ ရှိနဆေဲပါပဲ။
Irina Shayk ဟာ ရုရှားနိုငျငံသူဖွဈပွီး ရုရှားဆနျတဲ့ စှဲဆောငျမှုနဲ့ ကမ်ဘာကို သိမျးပိုကျထားတာဖွဈပါတယျ။သူမရဲ့ အခြိုးအစားနဲ့ သူမရဲ့ ရီဝဝေမေကျြဝနျးတှဟော သူမကို ခဈြစဖှယျဖွဈစတောဖွဈပါတယျ။
Ani Lorak ဟာ ယူကရိနျး နိုငျငံသူဖွဈပမေယျ့ သူမဟာ ရုရှားသှေးစပျသူဖွဈပါတယျ။ဒါကွောငျ့ ရုရှားရဲ့ မကျြလုံးမကျြခုံးနဲ့ ယူကရိနျးရဲ့ ဆံပငျ နှုတျခမျးတှရေရှိထားတာဖွဈပါတယျ။
Adriana Lima ဟာ ဘရာဇီးနိုငျငံသူဖွဈပါတယျ။သူမရဲ့ နှုတျခမျးဖူးဖူးလေးနဲ့ မကျြဝနျးရှဲကွီးတှဟော ဘရာဇီးသူတဈဦးရဲ့ အလှစဈကို ဖျောပွထားတဲ့ အလှပိုငျရှငျဖွဈပါတယျ။
Previous post လအလိုက်ခရီးထွက်သင့်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကဒေသများ. (ရှဲပြီးသိမ်းထားပါ)
Next post သရုပ်ဆောင်ချက်တွေ အရမ်းကြမ်းလွန်း တဲ့ “နင့်ရဲ့” သီချင်း MV နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလာတဲ့ ဆိုဖီယာ